FIFIDIANANA DEPIOTE AO MAHAJANGA : Samy manao izay ho afany amin’ny fandresen-dahatra ireo kandidà
Samy manao izay ho afany, handresena lahatra ireo vahoaka hifidy azy ireo kandida ho depiote eto Mahajanga. 14 mai 2019
Vao “précampagne” dia efa nanomboka izany ka ao ny mizara siny sy vilany, ao ny manao vovo, ao ny manohy ny asa tokony nataony tamin’izy mbola solombavambahoaka, ao ny manao tetezana…. Amin’ny ankapobeny dia mpanao asa soa ny ankamaroan’izy ireo. Misy koa anefa ny fantatra amin’ny sehatry ny haino aman-jery. Miady ihany koa ny resaka eny amin’ny tambajotra sosialy sy ao amin’ny vondrona “ino trengo zanaka Majahanga”, izay andraisan’ireo mponina sy ny zanaka am-pielezana anjara. Misy moa ireo vahoaka no mangataka tatitra amin’ireo depiote teo aloha tamin’ny nampiasana ny volan’ny CLD.
Ao koa ny mbola manontany ny asa vitan’izy mianadahy ireo teto amin’ny tanàna. Ho an’ireo kandida hafa kosa dia ny soa vitany teo amin’ny mpiara-monina no itsarana azy ireo. Misy ny milaza fa “mpanao lalana fa tsy mpanao làlana ny depiote”. Ao kosa ny manambara fa ny asa vitany no tokony hitsarana azy. Mafana tokoa ny adihevitra satria samy manana ny tohanany. Ny tazana aloha ankoatra an-dRahantanirina Lalao sy Nicolas Stephan izay samy solombavambahoaka teo aloha dia Afakandro Christian sy Assy no tena malaza sy mihetsiketsika. Ny sabotsy tolakandro teo kosa dia samy nanao diabe teny amin’iny lalana Mahabibo iny ny kandida Vevé sy ny kandida Nina.
Ny iray teo aloha ny faharoa kosa manaraka ato aoriana, nefa dia nilamina tsara, tsy nisy fifampihantsiana na fifandonana. Efa samy nifanome toky mantsy ireo kandida ny hanaja ny lalàn’ny fifidianana ka hanao adin’ombalahin’ny mpianakavy, amin’ity fififdianana ity, toy ny efa nataon’izy ireo tamin’ny fifidianana ben’ny tanàna teo. Ny sehatry ny fahitalavitra no tena iasan’izy ireo ka ahitana azy ireo isan’andro. Raha misy ireo mihoa-pefy dia misy hatrany ny mampatsiahy fa “ny kandidanareo arovana fa aza manaratsy ny hafa”. Misy moa ireo fahitalavitra rahavavy no manome fotoana iadian’ireo samy kandida hevitra amin’ny fampielezan-kevitra ka mampiakatra bebe kokoa ny haavo politikan’ny adihevitra.
Ao ny milaza fa Andry Rajoelina no lany Filoha ankehitriny ka tokony ny olona nomeny tsodrano no hofidiana. Misy ary maro amin’ireo nilatsaka koa anefa no mpanara-dia sy mpanohana ny Filoha Andry Rajoelina ary mampanantena fa hanohana azy hatramin’ny farany. Atahoran’ny mpitazana kosa ny tsy fananan’ireo kandida sasany antoko ka ahiana ho voavidin’ny manam-bola izy ireo fa tsy hanao ny asa sahaniny. Ilaina ihany koa mba ho olona nianatra sy mahay ny solombavambahoaka, hoy ny sasany satria volavolan-dalàna sy fandaniam-bolam-panjakana no hodinihiny ao ka tsy ho mpanangan-tanana fotsiny na ho diso fandray hany ka tsy manao ny asany fa misalovana ny an’ny hafa.
Ny tazana aloha dia efa mitaky ny tamberin’andraikitra ny ankamaroan’ny mponina na dia misy aza ny milaza fa “nangalatra jiaby ny teo aloha fa avelaonareo izy fa anjarany iny”. Betsaka ireo vahoaka te hanara-maso ny fandaniam-bolam-panjakana sy ny fampiasana ireny CLD sy FDL ireny, ny lalàna mifehy azy ireo sy ny fomba fampiasana azy, tsy mifidy saranga sy fari-pahaizana. Efa mahatsapa izy ireo fa volam-bahoaka ireo ampiasaina ireo ka ilain’izy ireo ho fantatra ny fampiasana azy manomboka amin’ny “appel d’offre” ka hatramin’ny tetibola ampiasaina ary ny kalitaon’ny asa. Hatreto anefa dia tsy misy fanazavana izany amin’ny vahoaka izay efa mitaky sahady ny mangarahara. Tsy ho mora ny andraikitra miandry ny solombavambahoaka izay voafidy eo. Tsy halalaka sy afaka manao izay tiany atao ihany koa izy ireo. Na izany aza dia betsaka ny kandida eto Mahajanga saingy roa ihany no hiaka-dapa aorian’ny fifidianana.